Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan u saarisay kooxda Tottenham – MANABOLYO NEWS
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan u saarisay kooxda Tottenham iyo tababaraheeda Jose Mourinho kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo dhowaan kusoo idlaaday garoonka Emirates Stadium.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar xooggan, iyadoo Gunners ay u muuqatay mid leh gacanta sare, waxaana xusid mudan in Macallin Mou baddel lagu qasbay kaddib markii uu dhaawac soo gaaray Heung-min Son kaasoo lagu baddelay Erik Lamela daqiiqaddii 19-aad ee kulanka.
Hase ahaatee, Spurs ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqaddii 33-aad ee ciyaarta kaddib markii uu gool mucjiso ah dhaliyay Lamela oo caawin ka helay Lucas Moura.
Arsenal ayaase si deg deg ah kaga jawaabtay goolka laga dhaliyay daqiiqaddii 44-aad ee ciyaarta, waxaana goolka barbarraha shabaqa dul dhigay Martin Oedegaard kaddib kubad uu soo salaxay Kieran Tierney.
Ciyaarta qaybteedii hore ayaa kusoo idlaatay barbarro 1-1, iyadoo xiddigaha macallin Mikel Arteta ay u muuqdeen kuwom ka firfircoon dhiggooda.
Markii dib la isugu soo laabtay, Arsenal ayaa hoggaanka markeeda la wareegtay kaddib markii rigoore loo dhigay uu gool u badelay Alexandre Lacazette daqiiqaddii 64-aad ee ciyaarta.
Daqiiqaddii 76-aad ee ciyaarta waxaa dibadda loo saaray Erik Lamela oo jaallihiisii labaad iyo casaan loo taagay, waxaana Tottenham ay ku dhammeysatay ciyaarta 10 xiddig.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay natiijo 2-1 ah oo ay Arsenal guul kaga gaartay dhiggeeda Tottenham kulanka loo yaqaano darbiga waqooyiga London.